Choputa Urquhart Castle na Scotland | Akụkọ Njem
Castle Urquhart dị na Scotland
Susana Garcia | | Ido Scotland
Nleta nleta na Scotland fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ na-agwụ na Edinburgh, mana e nwere ọtụtụ ihe karịrị ya, karịsịa ma ọ bụrụ na anyị na-aga Highlands ma ọ bụ Highlands, bụ ndị ghọworo ejiji site na usoro Outlander. Ọfọn, na mpaghara a ị nwere ike ịchọta ụzọ gasị nke ụlọ mgbidi oge ochie nwere ike ileta, yana n'etiti ha bụ Urquhart Castle, nke dịkwa na ụsọ mmiri nke Loch Ness a ma ama.
Taa, anyị ga-ahụ ụfọdụ n’ime akụkọ ihe mere eme nke nnukwu ụlọ a bụ mkpọmkpọ ebe ugbu a. Anyị ga-ahụkwa otu ị ga-esi ruo mpaghara mpaghara a nke Scotland ịnụ ụtọ ya. N'ihi na ọ bụ a njem pụrụ iche, yana ọdịdị ala na-enweghị atụ na ọtụtụ akụkọ ntolite.
1 Akụkọ banyere Urquhart Castle
2 Gaa na nnukwu ụlọ
3 Njegharị Urquhart Castle
Akụkọ banyere Urquhart Castle
Lọ a bụ nke dị n'akụkụ ugwu na mpaghara ugwu nke Loch Ness. Si ya ọnọdụ ị pụrụ ịhụ na ọ bụ ezigbo ebe na-ekiri ọdọ na gburugburu. Ihe a mere ka ọ bụrụ ebe yiri ka ọ bụ na mgbe ochie ka e biri. N’akụkụ ụlọ eze ahụ, e nwere pyramid nkume nke ihe yikarịrị ka ọ malitere n’ihe dị ka puku afọ abụọ tupu oge Kraịst, na-enye ihe àmà na-egosi na mmadụ ebiela n’ógbè a ogologo oge. E nwekwara foduru nke ọnụnọ nke Picts, ebo na-amalite site n'oge Alaeze Ukwu Rom.
Kaosinadị, ntụzịaka gọọmentị kwuru banyere nnukwu ụlọ ahụ bidoro ọtụtụ narị afọ mgbe nke ahụ gasịrị, na-edebanye aha ya na narị afọ nke XNUMX Bụ enyere ezinụlọ Durward ohere, ya mere ekwere na ha bụ ndị wuru ụlọ a. Na narị afọ a enwere nnupụisi megide Alexander nke Abụọ, onye na-achị Scotland, bụ onye tinyere ya ma nyefee mpaghara a n'aka nwa ya nwoke Alejando III. O doro anya na, ihe ochie kasị chebe nke obí eze bụ nke onyenwe Alexander III. Mgbe ọ nwụsịrị, nnukwu ụlọ ahụ gafere n'aka Onyenwe nke Badenoch, mana esemokwu na okpueze Bekee mere ka ọ bụrụ nchịkwa nke ndị Bekee. Thelọ ụlọ ahụ ewegharịrị maka okpueze Scottish na o doro anya na e megharịrị ya, ma emesịa ọ bụ aka okpueze ahụ na ezinụlọ MacDonald. Nnukwu ụlọ ahụ nọ na-ata ahụhụ n'ihi esemokwu ya na ezinụlọ ya na emesia ya na ndị Jekọb. Taa ọ bụ naanị mkpọmkpọ ebe nke anyị na-ahụ ka fọdụrụ.
Gaa na nnukwu ụlọ
Vardị ụgbọ njem dị iche iche nwere ike iji rute na nnukwu ụlọ. Nọmalị, ụgbọ elu na-abata Edinburgh, yabụ mpaghara a dịtụ anya. Ọ bụrụ na ị na-amaja, A oké echiche bụ na-mgbazinye ụgbọ ala. Ọ bụ ezie na ekwesịrị ịsị na a na-ebugharị ya n'akụkụ aka ekpe na okporo ụzọ ndị ahụ dị warara, n'ihi ya, ọ dabara adaba maka ndị nwere obi ike. Thegbọ ala ahụ ga-enye anyị nnwere onwe ịkwụsị ebe dị iche iche mmasị dịka Aberdeen, Fort George ma ọ bụ nnukwu ụlọ dị iche iche. I nwekwara ike ịkwụsị ebe dị iche iche n'akụkụ ọdọ mmiri, ka ị nwee ike were foto dị egwu nke oghere okike.
Wayzọ ọzọ iji ruo ebe ahụ bụ mee njem nlegharị anya na Edinburgh. Ha na-eji bọs bugara anyị ebe a, anyị na-alaghachikwa n’ụbọchị, ọ bụ ezie na anyị na-eji oge bọs etinye ya oge ka ukwuu. Can nwekwara ike bọs gaa Inverness wee were ebe obibi otu ụbọchị iji hụ mpaghara ọdọ ahụ nwayọ. Usesgbọ ala na catamaran na-apụ site na Inverness iji hụ ọdọ ahụ. Obere obodo Drumnadrochit bụ ebe ụgbọ ala Inverness na-akwụsịkarị. Si ebe a enwere bọs ma ọ bụ ịnwere ike ịga n'okporo ụzọ dị ọtụtụ kilomita n'akụkụ okporo ụzọ.
Njegharị Urquhart Castle
Mgbe ị bịarutere na nnukwu ụlọ ị ga- gafere ebe ndị ọbịa na-emechi ọnụ ụzọ ahụ. Site na ebe a, anyị nwere ike ịgafe n'ụlọ nri ma ọ bụ ụlọ ahịa ihe ncheta. Anyị na-ahụ onwe anyị mgbe anyị na-apụ na mpaghara ebe ị nwere ike ịhụ ọdọ na nnukwu ụlọ. Ka anyị na-abịarukwu nso, anyị nwere ike ịhụ mma nke mpaghara ahụ. Ala gbara ya gburugburu buru ibu ma nwekwa uzo ebe umu ugbo ndi na-agha ugbo mmiri.
N'ime ụlọ a, ị nwere ike ịgafe mpaghara niile, gbadata obere mpaghara n'akụkụ ọdọ mmiri ahụ, hụ mkpọmkpọ ebe ma gụọ ebe ọ bụla ebumnuche nke ọ bụla. Enwere ogwe nke anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ eserese na nwughari nke mpaghara ọ bụla, site na nduru dove na kichin na ụlọ elu. Echiche nke ọdọ mmiri site na ụlọ a mara mma enweghị atụ, na anyị nwere ike iche n'echiche ndị ahụ bi na ebe a dị ịtụnanya ọtụtụ narị afọ.
Na isi ụlọ elu ị ga-ịrị a gburugburu steepụ iji ruo n'elu, ebe e nwere mbara ala. Site ebe a ị nwere ọmarịcha echiche ịmalite ịchọ Nessie, anụ ọhịa ahụ akụkọ mgbe ochie na-ekwu na ọ bụ na ala ọdọ mmiri ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Ido Scotland » Castle Urquhart dị na Scotland
Otu ụgbọ mmiri na-agba ịnyịnya na ụgbọ mmiri Larrún